MUUQAAL laga duubay Ciidamadii ugu badnaa oo kasoo baxay Kismaayo, Iyo Goobaha Ay Duulaanka ku Qaadeen ? - Hablaha Media Network
MUUQAAL laga duubay Ciidamadii ugu badnaa oo kasoo baxay Kismaayo, Iyo Goobaha Ay Duulaanka ku Qaadeen ?
HMN:- Ciidamada xoogga dalka, nabadsugidda iyo daraawiishta Jubaland oo isgarabsanaya ayaa u dhaqaaqay dhanka deegaanada ku yaal galbeedka gobolka Jubada hoose halkaa oo ay ku xoogganyihiin maleeyshiyaadka Al-shabaab.
Ciidamadan oo aad u qalabeeysan ayaa ka ambabaxay magaalada Kismaayo, waxaana ay ku wajahanyihiin deegaano hoostaga Kismaayo.
Taliyaha guud ee ciidamada Jubaland Gen. Aadan Goojaar oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in ciidamadu ku wajahanyihiin deegaanada Kaamjaroon, Cabdalla Biroole, Beerxaano, Janaa Cabdalla iyo deegaano kale oo hoostaga.